के त्यहाँ अनन्त सजाय छ, विश्वव्यापी चर्च अफ गड स्विजरल्याण्ड (WKG)
के तपाईंसँग कहिल्यै अनाज्ञाकारी बच्चालाई सजाय दिने कारण छ? के तपाईंले कहिल्यै भन्नुभएको छ कि सजाय कहिले अन्त हुँदैन? मसँग हामी सबैको लागि केहि प्रश्नहरू छन् जो बच्चा छन्। यहाँ पहिलो प्रश्न आउँछ: के तपाईंको बच्चाले कहिल्यै तपाईंलाई अनाज्ञाकार गरेको छ? ठीक छ, सोच्नको लागि केही समय लिनुहोस् यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न। ठीक छ, यदि हो हो भने, अन्य सबै अभिभावकहरूले जस्तै हामी पनि दोस्रो प्रश्नमा आउँछौं: के तपाईंले आफ्नो बच्चालाई अनाज्ञाकारिताको लागि सजाय दिनुभएको छ? हामी अन्तिम प्रश्नमा आइपुगेका छौं: सजाय कति लामो भयो? अधिक स्पष्ट रूपमा, तपाईंले यो सजाय जारी नै रहनु भएको बताउनुभयो? त्यो पागल देखिन्छ, हैन?
हामीहरू कमजोर र असिद्ध आमा बुबाले हाम्रो अनाज्ञाकारिताको लागि हाम्रा बच्चाहरूलाई माफ गर्दछौं। हामी तपाईंलाई सजाय दिन सक्दछौं यदि हामी यसलाई परिस्थितिमा उपयुक्त मान्दछौं, तर मलाई आश्चर्य छ कि हामीमध्ये कति जना यसलाई सही मान्दछौं, यदि पागल भएन भने, बाँकी जीवनको लागि तपाईंलाई सजाय दिन।
तर कतिपय इसाईहरूले यो विश्‍वास गरेको हामी विश्वास गर्दछौँ कि हाम्रा स्वर्गमा हुनुहुने पिता, जो न त कमजोर हुनुहुन्छ न त असिद्ध नै हुनुहुन्छ, मानिसहरूलाई सदासर्वदा, सँधै, जसले सुसमाचार कहिल्यै नसुनेको पनि सजाय दिनुहुन्छ। र परमेश्वर बोल्नुहोस् कि उहाँ अनुग्रह र कृपाले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ।
हामी येशूबाट के सिक्छौं र अनन्त दण्डको बारेमा केहि इसाईहरूको बिचमा ठूलो अन्तर छ भनेर यसबारे सोच्न हामी एकछिन विचार गरौं। उदाहरणका लागि, येशूले हामीलाई हाम्रा शत्रुहरूलाई प्रेम गर्न र हामीलाई घृणा गर्ने र सताउनेहरूका लागि भलाइ गर्न आदेश दिनुहुन्छ। तर केही इसाईहरू यो विश्वास गर्दछन् कि परमेश्वरले आफ्ना शत्रुहरूलाई मात्र घृणा गर्नुहुन्न, तर शाब्दिक रूपमा तिनीहरूलाई पोलेको पाउनुहुन्छ, र त्यो निर्दयी र अथक प्रयास सदाको लागि गर्नुहुन्छ।
अर्कोतर्फ, येशूले यसो भन्दै सिपाहीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुभयो, "हे बुबा, तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, उनीहरू जान्दैनन् कि उनीहरू के गर्दैछन्।" तर कतिपय इसाईहरूले यो सिकाउँदछन् कि संसारको सृष्टि हुनुभन्दा अघि मात्र परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुने भविष्यवाणी गरेका थोरैलाई मात्र क्षमा दिनुहुन्छ। यदि यो सत्य हो भने, त्यसो भए येशूको प्रार्थनाले यति ठूलो फरक पार्दैन, ठीक छ?
हामी मानिसजातिले आफ्ना बच्चाहरूलाई जति माया गर्छौं, उनीहरूलाई परमेश्वरले कत्ति धेरै माया गर्नुहुन्छ? यो बयानात्मक प्रश्न हो - भगवानले उनलाई कहिल्यै गर्न सक्ने भन्दा बढी प्रेम गर्नुहुन्छ।
येशू भन्नुहुन्छ: “तिमीहरूमध्ये एक जना यस्तो बाबु छ, जसले माछा माग्दा माछाको लागि छोरोलाइ सर्प दिन्छ? … यदि तपाईं, जो दुष्ट हुनुहुन्छ, आफ्ना बच्चाहरूलाई राम्रो उपहार दिन सक्नुहुन्छ भने, पिताले उहाँसँग माग्नेहरूलाई कति अधिक पवित्र आत्मा दिनुहुनेछ! » (लूका .11,11.१13-१)
सत्य हामीलाई लेखेको जस्तै छ: «परमेश्वर संसारलाई साँच्चिक्कै माया गर्नुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले संसारलाई माया गर्नुभयो कि उहाँ आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो ताकि उहाँमा विश्वास गर्ने सबै हराउँदैनन् तर अनन्त जीवन पाउँछन्। किनभने परमेश्वरले उनको छोरालाई संसारको न्याय गर्नलाई पठाउनु भएको होईन तर उहाँद्वारा संसार बचाउनको लागि। (यूहन्ना:: १-।)
तपाईंलाई थाहा छ कि यस संसारलाई बचाउनु एउटा यस्तो संसार हो जुन परमेश्वरले यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ कि उहाँले आफ्नो छोरालाई बचाउनको लागि पठाउनुभयो - परमेश्वरमा र केवल परमेश्वरमा निर्भर गर्दछ। यदि मुक्ति हामीमा निर्भर थियो र मानिसहरूलाई सुसमाचार ल्याउनमा हामी सफल भयौं भने, त्यहाँ वास्तवमै ठूलो समस्या हुनेछ। तर यो हामीमा निर्भर हुँदैन। यो परमेश्वरमा निर्भर गर्दछ र परमेश्वरले येशूलाई काम गर्न पठाउनुभयो र येशूले त्यो काम गर्नुभयो।
हामी खुशीको साथ सुसमाचारको साझेदारी गर्न सक्षम भएका छौं। हामीले प्रेम गरेका र हेरचाह गर्ने व्यक्तिको वास्तविक उद्धार, हामीले चिनेका व्यक्तिहरू र ती मानिसहरू जसले सुसमाचार कहिल्यै सुनेका छैनन्। छोटकरीमा भन्नुपर्दा, सबैलाई बचाउनु भनेको परमेश्वरले ख्याल राख्नुहुने कुरा हो, र परमेश्वरले यसलाई साँच्चै राम्रो गर्नुहुन्छ। त्यसकारण हामी उहाँमाथि भरोसा राख्छौं, र उहाँ मात्र एक्लोमा!